I-Juniper Townhouse #3
I-i-townhouse ephelele ibungazwe ngu-Destiny & Michaela
U-Destiny & Michaela uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-95% wezivakashi zakamuva.
Nginama-AirBnB ambalwa kule ndlu yasedolobheni. Lokhu kunikeza iqembu elikhulu ikhono lokuqasha indawo engaphezu kweyodwa eduze kakhulu kwenye. Igumbi lokuphumula, igumbi lokudlela kanye nekhishi konke kuvuliwe, okwenza kube kuhle. Igumbi elivulekile esitezi sokuqala lenza ijubane elihle elivamile lokuthi abantu bahlanganyele ndawonye. Ngaphandle komnyango ongemuva kunendawo ye-patio lapho ungajabulela khona isimo sezulu ngaphandle.
Uzoba nendlu yonke yedolobha enamakamelo amathathu uwedwa. Kunendawo enkulu yokuhlala, yokudlela nekhishi esitezi sokuqala, okwenza kube indawo enhle yokuba ne-hangout nokuzijabulisa. Phezulu kunamagumbi okulala amathathu, amagumbi okugeza amabili, nendawo yokuwasha.
Ibungazwe ngu-Destiny & Michaela
Uma unombuzo ungangabazi ukungishayela ucingo noma umbhalo.